नौ महिनामा तीन अर्बको चिया निर्यात «
नौ महिनामा तीन अर्बको चिया निर्यात
चालू आर्थिक वर्षका नौ महिनामा चिया निर्यात ६४ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको माग बढ्दै गएपछि निर्यात बढेर ३ अर्ब ६ करोड ८९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९७ लाख १४ हजार ७ सय २३ किलो पुगेको हो ।
अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा १ अर्ब ७५ करोड ११ लाख १६ हजार रुपैयाँको चिया निर्यात भएको थियो । स्वदेशी चियाको माग बढ्दै गएकाले निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ बराबरको ११ हजार ८५ मेटन चिया निर्यात भएकोमा चालु आ.व. को ९ महिनाको अवधिमै ३ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको ९ हजार ५ सय ७० मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार आ.व. २०७५÷०७६ मा २५,२०५ मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुँदा २०७६÷०७७ मा २४ हजार १ सय १८ मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको थियो । कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पादनमा गिरावट आएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको माग बढ्दै गएकाले निर्यात बढेको बताए । कोभिडको कारणले चियाको उत्पादन कम भएपनि निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यो वर्ष कोभिडको कारणले चिया उत्पादनमा कमी आएको उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष वैशाख १५ मा राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएकोमा गत वर्ष र यो वर्ष कोभिडको प्रभावले दिवस मनाउन नसकिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यो वर्षको २५औं राष्ट्रिय चिया दिवसको नारा ‘स्वदेशमा उत्पादित चिया पिउने गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ” तय गरिएको थियो ।
इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, ललितपुर संखुवासभालगायतका जिल्लामा चिया उत्पादन हुने गर्छ । मुलुकमा अर्थाेडक्स र सिटिसी चिया उत्पादन हुने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी चियाको माग बढ्दै गएकाले यो वर्ष निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
कोरोना महामारीले यो वर्ष चिया उत्पादनमा कमी भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । लकडाउनका बीच पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरेर चिया बगान र उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको बोर्डले जानकारी दिए ।
मुलुक चियामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशमा चिया उपभोग गरी बढी भएको उत्पादन भारतलगायतका तेश्रो मुलुकमा निर्यात हुने गर्छ । नेपाली चियाको खपत वार्षिक दुई सय ग्राम प्रतिव्यक्ति भन्दा कम रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमै वार्षिक ३ सय ३० ग्राम प्रतिव्यक्ति खपत रहेको सन्दर्भमा नेपालमा चिया उपभोग अत्यन्तै न्यून रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले आगामी दिनमा चियाको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।